We She Me: MCSE Certification
Andy Myint - 9/2/09, 10:40 PM
ကိုနီလင်းရဲ့ စာအပေါ် ကျွန်တော်ကပဲ ကောမန့် ပြန်လိုက်ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ စာဖြေဌာန မရှိလို့ သြော်ဇီကို Cisco (အဆင့်မြင့်တန်း) စာမေးပွဲ လာဖြေတဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော် ညစာစားခွင့်ကြုံလိုက်လို့ သူရဲ့ အနေအထားကို တစေ့တစောင်း အကဲခတ်မိတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ သူက ISP မှာ လုပ်နေတာဖြစ်ပြီး သူက ကုမ္ပဏီ သေးသေးလေးတွေမှာ System Administration အလုပ်တွေကို ငြီးငွေ့သွားပုံရပါတယ်။ သူဖြေတဲ့ စာမေးပွဲကလည်း လက်တွေ့လိုမျိုး လုပ်ရတာ ဖြစ်လို့ စာအလွတ်ကျက်ပြီး ဖြေလို့ မရတဲ့ အကြောင်း၊ သူ့အနေနဲ့တောင် နှစ်ခါပြန် ပြန်ဖြေရကြောင်း ပြောပြပြီး သူ့ကြည့်ရတာ MCSE လိုမျိုးကို အတော်လေး ရိုးသွားပုံရပါတယ်။ သူလည်း MCSE ကနေ လာတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူအဆင့်ဆင့်တက်လှမ်း သွားတာ အရမ်းမြန်လို့ သူ့ကို ကျွန်တော် အတော်လေး အားရ အားကျပါတယ်။ ဒီ Certificate ရပြီးရင်တောင် သူ့ကုမ္ပဏီ တစ်လကို ၄ ထောင်လောက် အသာလေး ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ သူကုမ္ပဏီက သူ့ကို Sponsor လုပ်ပေးပေမယ့် အချုပ်အနှောင် မဖြစ်အောင် သူ့ဘာသူ ကုန်ကျခံတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အဲဒီ စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရတာရယ်၊ ခရီးစရိတ်ရယ်၊ စာမေးပွဲကြေးတွေရယ် ပေါင်းလိုက်ရင် သောင်းဂဏန်းလောက် ကျတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေလည်း ကြားရပါတယ်။ Certificate ပြောပေမယ့် ကျောင်းတက်သလိုပါပဲ ခက်ခဲပြီး ကုန်ကျပါလားလို့ တွေးမိပါတယ်။
ကိုသူ - 9/3/09, 1:42 AM
ကျနော့်ကို တခုလောက် ခွင့်ပြုပါ။
Post နဲ့တော့လည်းမဆိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ခွင့်ပြုပါ။
ကျနော်……IT သမားတယောက်ရဲ့ ဘဝကို ငြီးငွေ့ ပြီး စိတ်ကုန်သွားခဲ့တာ သိပ်တော့မကြာသေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သိပေမယ့် IT လုပ်ငန်းခွင် ရောင်းရင်းများကိုလည်း မေးကြည့်ချင်နေမိတယ်။ IT သမားတယောက်ရဲ့ ဘဝကို ဘယ်လိုခံစားမိသလဲဆိုတာ။
nyimuyar - 9/3/09, 2:06 AM
Thanks Ko Andy and Ko Nyi Lynn, I've copy to show to my brother.
Anonymous - 9/3/09, 2:49 AM
I read in somewhere! but can't remember...
"when you choose something for your life long profession, IT pro, pianist or whatever, you should beleive in two gloden rules,
2. Have Fun"
so if you lack one thing, you cant be happy...
standing out in IT field is not really easy, ever learning and competing with hungry professionals, and job market is uncertain, I can understand that. feel tired sometimes..
စန္ဒကူးမေ - 9/3/09, 11:09 AM
အကိုရေ..သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လဲ MCSE တက်နေရင်းနဲ့ အိုလံပစ် လုပ်ငန်းစုမှာပါလုပ်နေတယ်.. သူဘာတတ်လဲတော့ တစ်ခါမှနားမလည် ခဲ့ဖူး..အခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့ ကိုနီလင်းနဲ့ ကိုအန်ဒီကို ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Anonymous - 9/3/09, 4:10 PM
ကိုအန်ဒီရေ.. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော်လဲ MCSE ပြန်ဖြေဖို့လုပ်နေတုန်း ဒီပိုစ့်လေးဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျာ.... အရမ်းကောင်းပါတယ်..ကျွန်တော်လဲအစက ဒါတွေမရှိလဲ အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးထင်နေခဲ့တာ..အခုတော့ဖြေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဗျို့။
Vista - 9/10/09, 2:43 PM
MCSE ဆိုလို့ ဝင်ပါလိုက်အုံးမယ်
ကျနော်အတွက်ကတော့ MCSEဟာ Basic certificate ပေါ့ Electronics & communication နဲ့Bachelor ဘွဲ . ကိုရအောင်ယူလိုက်ပါတယ်
ကျောင်းတက်နေစဉ်မှာ Networking & System ပါ လေ့လာပါတယ်
ကျောင်းပြီးတာနဲ့ MCSE ဖြေတယ်
အလုပ်တန်းဝင်လိုက်ပါတယ် ISP မှာပါ အခု Networking ဘက်ကိုပြောင်းဖို့ လုပ်နေပါတယ် ဒီအလုပ်မှာ Network ပါကိုင်ရလို့ ပါ CCNA ကနေ CCIE အထိသွားဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်
Electronics မှာ Master တက်စေချင်တဲ့မိဘတွေဆန္ဒကိုမလိုက်လျှောတော့ပါဘူး ကိုယ်ဝါသနာပါတာပဲဆက်လုပ်ခြင်ပါတယ် System /Networking Field မှာမိန်းကလေးသိပ်မရှိတဲ့အတွက် စလုံးလိုနေရာမှာတောင်ကိုယ် Group မှာကိုယ် ၁ ယောက်ထဲမိန်းကလေးပါ ဒါပေမယ့်ပျော်ပါတယ်
ကိုသူ့ ကို အကြံပေးရရင်တော့ကိုယ်ဝါဿနာမပါရင်မဆက်တာကောင်းပါတယ်
တိုးလို့ တန်းလန်းမှမပျော်ရင် စိတ်ဆင်းရဲရမှာကကိုယ်ပဲ
Anonymous - 9/12/09, 12:02 PM
D u think MCSE isabasic certificate? I think it is same level as CCNP.To becomeacompetent MCSE, It takes at least2or3years, but you can think it isabasic one if yr input is little and U dont get much from that. Just memorizing old questions and getting MCSE , this is very common now
Anonymous - 9/12/09, 12:26 PM
wanna advise you If you are really intersted in networking, you should pursuit Cisco,But if you want to do networking bcos you think system engineering isabasic level of networking, it is wrong. MCSE level knowledge isahuge for me, very broad such as Active directory, DNS, RRAS, WINS, Exchange, SQl , really suprised some ppl think it is basic.
MCP, CCNP, JNCIS-M, CCIE pursuit
Vista - 9/15/09, 2:52 PM
I thought you have misunderstood my comment.
I don't think I wrote MCSE is an easy one. I said only for me itsafirst step in IT cert. I m really interested in networking and will pursuit CISCO.
I surely know MCSE isavery wide one . It’s also based on your working experience .After workingafew years asaSystem Engineer, I also know that I have numerous things to learn even though I amaMCSE (always make me feel like I ma1st grade kid who is trying to read “war and peace “.But I won’t be answering MCSE2008 or upgrade my cert again. But I will keep on learning and learning.
I will be trying to learn CISCO and get cert in networking field. Correct me if I m wrong, I thought however you master in one subject if you don’t holdacert asaproven record, you cannot easily get the related job.
I hope you should read my previous comment clearly if you can read and understand Burmese. : P
PS. MCP, CCNP, JNCIS-M, CCIE pursuit (don’t make me envy you man! :D )
Anonymous - 12/28/09, 3:20 PM
Forget about it vista, some ppl like mad dog. Anyhow they bark .
Anonymous - 3/2/10, 7:18 PM
I would like to know about MCA